Maareeyaha Guud ee cusub ee TÜVASAŞ Erol Inan ayaa xafiiska la wareegaya | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAErol Inan, Maareeyaha Guud ee cusub ee TÜVASAŞ, wuxuu qaabilay xafiiska
06 / 10 / 2012 DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Turkey baabuur Industry Inc. ee cusub General Manager Erol bilaabay inuu rumaysan hawsha.
Salaaddii hore ee subaxnimadii Turkiga baabuur Factory (TÜVASAŞ) Maareeyaha Guud Erol Inal in bilowga yimid hawsha, ayaa kulan hordhac ah shaqo ugu horeysay. Maareeyaha guud ee TÜVASAŞ Erol İnal, oo la kulmay Kaaliyaha Guud ee Maareeyayaasha, Maareeyayaasha Warshadaha, Madaxa Qaybta iyo La-taliyayaasha, ayaa la kulmay labadiisii ​​asxaabtiisa waxayna heleen macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan howlaha socda.
Isagoo sheegay in inta badan asxaabtiisa TÜVASAŞ ay yihiin dad aqoon u leh TCDD, oo uu sanado badan u soo shaqeeyay, ayuu yiri İnal, hepimiz Dhammaanteen waan ku biirin doonnaa howlaheenna. Waxaan qiimeeya wada shaqaynta kooxeed. Daacadnimo, furfurnaan iyo daah furnaan waa inay noqotaa mabda'a ugu weyn. Waxaan inta badan rabaa inaan joojiyo shaqaalaha kale ee ila shaqeeya. Waxaan la yeelan doonnaa kulan iyaga sida ugu dhaqsaha badan. Waa inaan ku wada jirno wanaag iyo xumaan. Aaminnimada iyo taageerada aan ka maqli doonno midba midka kale waxay noo horseedi doontaa yoolalka aan higsaneyno. Waxaan go aansanaynaa qeybahayaga howlgalka. Waxaan u shaqeyn doonaa si taxadar leh iyo dareen guud si aan u gaarno himilooyinkeena. Waxaan diiradda saari doonnaa ganacsigeenna; Waxaan u qaadanaynaa amarro cusub TÜVASAŞ waxaanan sare u qaadaynaa mugga ganacsiga. Waxaan u baahanahay inaan abuurno shaqooyin cusub. Tani waxay sharaf noo noqon doontaa annaga iyo Adapazarı. TÜVASAŞ, waxaan aaminsanahay inaan u baahan nahay inaan soo saarno Tareenka Xawaaraha Sare marka hore waanan rabaa. ”
Tüvasaş General Manager Erol Inan booqday Uncuogle iyo Atabek
Erol Inal ayaa xaflad u qabtay TÜVASAŞ
Maamulaha Guud ee TÜVASAŞ Erol Inal ayaa booqday aqoon-isweydaarsiga bogga oo la kulmay shaqaalaha.
Maamulaha Guud ee TÜVASAŞ Erol Inal
TÜDEMSAŞ General Manager Yıldıray Koçarslan ayaa booqday TÜVASAŞ
Maamulaha guud Erol Inan
Turkey baabuur Factory
Turkey baabuur Industries Inc.
Taariikhda Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir